Mozambique: 400,000 vashanyi vanotarisirwa
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Mozambique: 400,000 vashanyi vanotarisirwa
Maputo — vashanyi 400,000 XNUMX vari kutarisirwa kushanyira Mozambique mwedzi uno waZvita, sezvakataurwa nebazi rezvekushanyirwa kwenyika.
Mwaka wepamusoro-soro wekushanyirwa kweMozambique unotanga kubva kutanga kwaZvita kusvika pakati paNdira, apo nhamba huru dzezvizvarwa zveSouth Africa dzinoenda kumahombekombe uye zvitsuwa zvekumaodzanyemba kweMozambique. Vanobatanidzwa nenhamba inowedzera yevaEurope, vachipukunyuka kubva muchando chekuchamhembe kwehemisphere.
Sekutaura kwegurukota rezvekushanyirwa kwenyika, VaFernando Sumbana, huwandu hwekushanyira vashanyi gore rino hunotarisirwa kunge huri pakati pegumi nematanhatu ne16 kubva muzana kupfuura muna 20, apo vashanyi vanosvika miriyoni imwe nemazana matatu vakashanya munyika.
Inofungidzirwa kuti, paavhareji, mushanyi anogara munyika kwemazuva matatu, nemari inoshandiswa zuva nezuva ye60 US madhora (kunze kwekugara).
Sumbana anobvuma kuti iyi ifungidziro yakaoma zvikuru, yakabva muongororo umo muenzaniso wevashanyi wakabvunzwa kuti vakanga vashandisa marii. "Hatisati tave nehurongwa hwekuverenga hunoita kuti vaongorore nemazvo kuti vanoshandisa marii," akadaro.
Pari zvino zvinonzi kushanya kuri kupa chikamu che2.5 percent cheGross Domestic Product, uye kuti inokwanisa kupa mari yakawanda, sezvo nzvimbo zhinji dzinokwezva vashanyi munyika dzichiri kushandiswa zvishoma.
Gore rapera, mari yakawanikwa kubva kune dzimwe nyika dzekushanyira nyika yakasvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nenhatu emadhora, kuwedzera nezvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana pahuwandu hwa163.
United Airlines, EgyptAir yazivisa chibvumirano chekodeshare
Kisimusi yakauya nekukurumidza kune Vechidiki Skal Thailand